वैशाख १७ गते क्षुद्रग्रह नजिक आउदाँ पृथ्वीलाई खतरा छ ? • Pokhara News by Ganthan
काठमाडौं, १५ वैशाख / अहिले सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्रग्रह’bout निकै चर्चा भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्रग्रह १९९८ ओ.आर.२ पृथ्वी नजिकै आउने भन्ने हल्ला फैलिएको छ । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षुद्रग्रह’bout जानकारी गराएको छ ।
अप्रिल २९ तारिख वैशाख १७ गते के हुँदैछ ?
यस दिन यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिक आउँदैछ । तर अत्यन्तै नजिक हुँदा पनि यो आकाशीय पिण्ड हामी भन्दा करिब ६२ लाख ८२ हजार किलोमिटर टाढा रहनेछ । पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको औसत दूरी करिब तीन लाख ८४ हजार किलोमिटर छ । त्यसैले यसरी नजिक आउँदा पनि यो क्षुद्रग्रह हामीबाट चन्द्रमा भन्दा करिब साढे सोह्र गुणा टाढा रहनेछ ।
यो क्षुद्रग्रह सन् १९९८ जुलाई २४ तारिखमा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो । त्यसैले यसको नाम अर्थात् १९९८ ओ.आर.२ रहन गएको हो । यो क्षुद्रग्रहको वैज्ञानिक नाम ’५२७६८’ हो । कुनै पनि क्षुद्रग्रहलाई हामीले खगोल वैज्ञानिकहरुले राम्रोसँग बुझेपछि यस्तो किसिमको नाम दिइन्छ । विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निगरानीबाट प्राप्त ज्ञान अनुसार यो क्षुद्रग्रहबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा छैन । त्यसैले हाल कोही पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था होइन ।
के यो क्षुद्रग्रहलाई वैशाख १७ गतेरअप्रिल २९ तारिखका दिन नेपाली आकासमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ ?
त्यसैले नजिक आउँदा पृथ्वी-चन्द्रमाको दूरीभन्दा कम्तिमा १६ गुणा टाढा रहने र करिब २ किलोमिटरको रहेकोले साथै यसको औसत अपेरेन्ट म्याग्निच्युड करिब ११ रहेकाले नाङ्गो आँखाले यसलाई देख्न सकिँदैन। यसलाई अवलोकन गर्न ठूलै खालको टेलिस्कोप आवश्यक पर्छ ।